Ogaden News Agency (ONA) – Walbahaar ka jira lacagaha gargaarka ah ee lasiiyo Ethiopia iyo UK oo soosaartay deeqda ay siiso Ethiopia oo dhan 1.325 Billion.
Walbahaar ka jira lacagaha gargaarka ah ee lasiiyo Ethiopia iyo UK oo soosaartay deeqda ay siiso Ethiopia oo dhan 1.325 Billion.
Wasaarada Deeqaha horumarka ee wadanka Boqortooyada Britain ayaa soo saartay deeqaha uu siiyo wadamada sookoraya. Hadaba waxaa haayadan oo horey loogu eedeyay Deeqda ay siiso wadanka Ethiopia oo aan dabagalkii loobaahna lagu sameyn ayaa sii kordhisay deeqdi ay siin jirtay Ethiopia. Haayada Xuquuql Insaanka Human Rights Watch iyo BBC news night ayaa hada ka hor soo saaray in lacagaha deeqda gargaarka ee lasiiyo Ethiopia loo adeegsado cadaadsika shacabka Ethiopoia.
Dowlada UK ayaa marar badan lagu dhaleeceeyay arrintan, Waxaana wadanka UK qiimeyn adag lagu hayaa dhaqalahaas lasiiyo Ethiopia. Lacagta deeqda ah ee Ethiopia ka heshay wadanka boqortooyada Britishka waxay noqotay
Sanadkii 2010 illaa sanadka 2015 lacag dhan £1.325 billion oo lacagta Poundka ah. Lacagtaas oo noqotay lacagta ugu badan ee Boqortooyada wadanka Britishku aysiinayso wadamada saboolka ah iyo kuwa soo koraya. Wadanka Ingiriiska oo hada ka hor siin jiray India lacagta deeqda ah ee ugu badan uu bixiyo ayaa gabi ahaanba jaraya deeqdaas sanadka 2015. Waxaana booskeedi galay Wadanka Ethiopia oo hada helaya lacagta ugu badan ee wadankan Ingiriisku ku bixiyo lacag ahaan ama deeq ahaanba.
Wadanka Ethiopia waxa uu ka heli doona Wadanka UK lacag dhan £331 Million sanad kasta illaa laga gaadhayo sanadka 2015.
Lacagtan ay dowlada Ingiriisku siiso Wadanka Ethiopia ayaa dood adag ka socota waxaana marar badan loo soo jeediyay dowlada Boqortooyada Britishka inay arrintaan ka fiirsadaan kuna daba galaan gumeysiga Ethiopia. Waxaana ka hadlay arrintan Haayado badan.
Gumeysiga Ethiopia ayaa dhaqan u leh innuu shacabka Ethiopia u geysto xasuuq iyo abaaro gumeysigu gacantiis ku sameey0 si uu balaayo u abuuro kadibna uu beesha caalamka gargaar ka dalbado. Gumeysiga Ethiopia ayaa ogoleyn in haayadaha deeqda gaadhsiya dadka ay ka howlgalaan dhulka ay saameyso abaaraha iyo goobaha dhibaatoyinku ka jiraan iyaga oo sameystay sharciyo ay kaga hortagaan. Arrintaasna waxay keentay in wadamada ree galbeedku aysan xaqiijin karin in lacagahaas gaadhaan dadkii loogu talo galay iyo inkale toona.
Jaaliyadaha Ogadeniya ee wadanka UK ayaa marar badan arrimahan ka dacwooday.
Cadeymaha soo baxay ee qeexaya nidaamka ay Dowlada Ethiopia ugu adeegsato siyaasada deeqda loogu talagalay shacabka ayaa walbahaar badan ku dhalisay haayadaha arrimahan u ololeeya. Waxaana loo badinaya sanadka 2015 in Ethiopiana ay saameyso oo laga goosto deeqda lasiiyo gabi ahaanba haddii ay la imaan waayaan nidaamki ku haboona ee deeqdaas lagu gaadhsinayay dadkii saboolka ahaa.